काेरोना भाइरसको संक्रमणबाट महिलाभन्दा बढी पुरुषको मृत्यु किन ? यस्तो छ कारण |
काेरोना भाइरसको संक्रमणबाट महिलाभन्दा बढी पुरुषको मृत्यु किन ? यस्तो छ कारण
२०७६, २३ चैत्र आईतवार १२:२१ April 5, 2020 ताजा खबरस्वास्थ्य
काठमाडौं । सारोन मोलेम । कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वभरि फैलिएको छ। यो महामारीसँगै एउटा चाखलाग्दो तथ्य लुकेको छ। त्यो हो– संक्रमणबाट मृत्यु हुनेमा हरेक देशमा महिलाभन्दा पुरुष बढी छन्। यस्तो किनरु आनीबानीका आधारमा यस्तो भएको विश्लेषण गरिएको छ।
यो विश्लेषण केही हदसम्म तर्कसंगत पनि छ। चुरोट बढी तान्ने, समयमै स्वास्थ सेवा लिन अनिच्छुक र तुलनात्मक रुपमा हात कम धुनेमा महिलाभन्दा पुरुष बढी भएकाले यस्तो तर्क गरिएको हो।
तर, यहाँ एउटा वैज्ञानिक तथ्यलाई बिर्सिएको छ। त्यो हो– जीवनको निरन्तर अस्तित्वको हिसाबले महिलाभन्दा पुरुष कमजोर लिंग हो। यो जीवनको कालखण्डमा एकपटक मात्र आउने महामारीका बेलाको प्रसंग मात्र होइन।
लैंगिक हिसाबमा अन्तर्निहित जैविक फाइदा जीवनको हरेक चरणमा हुन्छ। उदाहरणका लागि पहिलो जन्मदिन मनाउने मौका केटालेभन्दा केटीले बढी पाउँछन्। एक सय वर्षभन्दा बढी उमेरका मानिसमा ८० प्रतिशत महिला छन् भने ११० वर्षभन्दा बढी उमेरकामा ९५ प्रतिशत महिला छन्।
बलिष्ठ मांसपेसी, उचाइ तथा आकारका हिसाबले पुरुष अगाडि रहे पनि जन्मदेखि जीवनको उत्तरार्धसम्म आइपर्ने भौतिक कठिनाइ झेल्नेमा आनुवांशिक महिला अनुवाशिंक पुरुषभन्दा अघि छन्। हामीले धेरै समयसम्म पुरुष छिटो मर्नुमा आनीबानीलाई प्रमुख कारण मान्यौं।
तर महिलाको बाँच्न सक्ने क्षमता लैंगिक हिसाबले अहिले पनि पुरुषभन्दा अगाडि नै छ। त्यसो भए महिलाको आनुवांशिक श्रेष्ठताको पछाडि के कारण छ त रु यो वंशाणुभित्र रहने क्रोमोजोमको तहबाट सुरु हुन्छ। लिंगका हिसाबले क्रोमोजोममा रहने भिन्नता हेर्दा आनुवांशिक महिलामा दुइटा एक्स क्रोमोजोम हुन्छन्, जुन एउटा पिताबाट र अर्को आमाबाट आएका हुन्छन्।
आनुवांशिक पुरुषमा उसको आमाबाट प्राप्त एउटा मात्र एक्स क्रोमोजोम र अर्को वाई क्रोमोजोम हुन्छ। एक्स क्रोमोजोमले दिमागको विकास र त्यसलाई यथावत राख्न भूमिका खेल्ने समाचार नागरिक दैनिकमा छापिएकाे छ ।